Antsoina ny tanora satria mahery izy ireo
"Nanoratra taminareo ray aho, satria efa nahalala Ilay hatramin'ny voalohany hianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho, satria mahery hianareo, ary mitoetra ao aminareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy hianareo." - 1 Jao. 2:14.
Miantefa amin'ny tanora rehetra izay efa nisikina ny fiadian'ny fahamarinana rehetra io teny fankasitrahana sady torolalana io. Tanora sady mahery izy, ka afaka manao zavatra lehibe ho an'Andriamanitra raha Andriamanitra no hany itokiany. Ny efa zokinjokiny kokoa izay lazaina hoe "ray" dia manana asa notendrena hataony eo amin'ny fihazonana ny faneva. Noho ny fahatsapan'izy ireo ny enta-mavesatra eo amin'ny fiainana anefa, dia mety indrindra raha ny tanora no ampirisihina handranto fahalalana hoenti-miroso amin'ny asa amin'ny alalan'ny fananany fanandramana eo amin'ny fahalalana an'i Kristy. Koa rehefa milatsaka avy eny an-tanan'ireo ray ny faneva, dia ho hain'ireo tanora matanjaka ny handray izany faingana sy hanandratra izany ho ambony.
Maro ny tanora amin'izao andro izao no hitady ny Soratra Masina ho toy ny fitady harena miafina, ary rehefa mahita ny vatosoan'ny fahamarinana izy, dia hanokatra ny haren'ny Teny ho ao an-tsain'ny hafa koa (...) Tsy hery ara-batana ihany tsy akory no voalaza ao amin'ny hoe "hianareo tanora". Ny dikany dia hoe efa nofanina hieritreritra ny saina, ary voahazona ho madio sy mahery hatrany tamin'ny alalan'ny fananana fahazarana voalanjalanja araka ny onony izany. Midika izany fa efa niroso tamim-pahamatorana ny tanora, ary efa nandresy ilay fahavalo, sady mampifandray ny finoana an'i Jesôsy Kristy amin'ny fiainany andavanandro, ka maneho an'i Kristy mandrakariva eo amin'ny asa aman-draharaha fanaony. Midika izany fa tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra izy.
Ny tanora izay efa nanolotra ny tenany ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, dia eo amin'ny toerana vonon-kiady amin-kerim-po ny adin'ny Tompo. Aoka ny tanora handray an'i Kristy ho modeliny, ka handeha amim-pahitsiana izy, ho tia miantra, ary hiara-mandeha amin'Andriamanitra amim-panetren-tena. Ho mahery tokoa izy amin'izay fotoana izay. - YI, 25 Oktobra 1894.
Ho voazaha toetra isika (...) ary afaka andro sy volana ary taona, dia ho resintsika ny izaho, ary hiroborobo ao amintsika ny toetra ambony ananan'ny mahery fo. - SW, 7 Febroary 1905.